နိုက်ဂျီးယားမှ ၃ နှစ်သမီး ကမ္ဘာ့ အသက်အငယ်ဆုံး ကုရ်အာန်ကျမ်း အာဂုံဆောင် နိုင်သူဖြစ်လာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃
အသက် ၃ နှစ်နှင့် ၈ လ အရွယ်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် တစ်အုပ်လုံး အလွတ်အာဂုံဆောင်နိုင်သူ သမိးငယ်အား မိခင်နှင့် အတူတွေ့ရစဉ်
ကိုင်ရို။ ။နိုက်ဂျီးရီးယားမှ အသက် ၃ နှစ်အရွယ်ရှိ သမီးငယ်တစ်ဥိးသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် တစ်အုပ်လုံးကို ကျက်မှတ်နိုင်ခဲ့ကာ နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကို အံအားသင့်စေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အငယ်ဆုံး ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် အာဂုံဆောင်နိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
This entry was posted on February 11, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ(လျှောက်ထားဆဲ)၏ (တကြိမ်) နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့
မုတ်သုန်လေက ဆင်းသက်လာကြောင်း →